विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राष्ट्र बैंकले रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने,बचतपत्र खरीद गर्दा यसका के छन् फाईदा ? - samayapost.com
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राष्ट्र बैंकले रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने,बचतपत्र खरीद गर्दा यसका के छन् फाईदा ?
समयपोष्ट २०७४ मंसिर ५ गते ५:०८
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १० गतेदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैर–आवासीय नेपालीलाई लक्षित गर्दै ५० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने भएको हो । पाँच बर्ष अवधिको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ६ -६ महिनामा बार्षिक दश प्रतिशतका दरले व्याज भुक्तान गर्ने बताएको छ ।
बचतपत्र खरिदका लागि मंसिर १० गतेदेखि २९ गतेसम्म आवेदन खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बचतपत्रको निष्काशन भने पुष ५ गते हुनेछ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा न्युनतम पाँच हजार रुपैयाँ र बढीमा पाँच हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी आह्वान गरिएको रकमसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । बचतपत्रलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन तथा दिन समेत सकिने बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंक र नेपालबीच खरिद सम्झौता : नेपाललाई कार्बन सञ्चितिबापत पाँच अर्ब